प्रेमिकालाई रमाइलो म्यासेज पठाउने एप ! — Ujyaalo Lalteen
गृहपृष्ठ » मनोरञ्जन, मुख्य समाचार, सूचना प्रविधी → प्रेमिकालाई रमाइलो म्यासेज पठाउने एप !
August 11, 2015७६० पटक
साउन २६ – आफ्नी प्रेमिकालाई सधैं खुशी राख्नका लागि दिनमा धेरै पटक म्यासेज पठाउन चाहानु हुन्छ भने यो काम झन्झटिलो हुन्छ । कहिले काँही आफ्ना साथी, दाजुभाइ तथा परिवारसँग भएका बेला तपाईले प्रेमिकालाई फोन वा म्यासेज गर्न मिल्दैन होला ।
तर यो कुरा प्रेमिकालाई थाहा हुँदैन । यसले गर्दा तपाईंको सम्बन्धमा घटपट आउन सक्छ । तर अब भने यो समस्या समाधान हुने भएको छ । किनकी प्रेमिकालाई बेला बेलामा माया प्रेमले भरिएका म्यासेज पठाइदिने मोबाइल एप्लिकेसन बनेको छ ।
ब्रो एप नाम गरेको यो एप्लिकेशनले तपाई व्यस्त भएको बेलामा तपाईंकी प्रेमिकालाई माया प्रेमले भरिएका म्यासेज पठाउँछ । एन्ड्रोइड फोन चलाउने यो एप्लिकेशन निशुल्क डाउनलोड गर्न पाउँछन् । तर आइफोनमा डाउनलोड गर्नका लागि भने एक सय ४ रुपैयाँ तिर्नु पर्छ । ब्रो एप डाउनलोड गरेर मोबाइलमा इन्स्टल गरेपछि आफ्नी प्रेमिकाको फोन नम्बर एपमा फिड गर्नुपर्छ । त्यसपछि तपाईंले पाँच वटा म्यासेज छनौट गर्नु पर्छ । म्यासेज छनौट गर्दा प्रेमिकालाई मन पर्ने खालको छनौट गर्न भने बिर्सनु हुँदैन । म्यासेज छनौट गरेपछि तपाईं त्यो म्यासेज कुन बेला प्रेमिकालाई पठाउन चाहानु हुन्छ त्यो समय पनि तोक्नु पर्छ । तपाईले चाहेको बेला म्यासेज पठाउन सकिन्छ ।
यो एप्लिकेशनले म्यासेज पठाउन मात्रै मिल्छ । यदी एपको सहायताले पठाएको म्यासेजको जवाफ प्रेमिकाले दिएमा भने समस्या हुन सक्छ । यो एप पुरुषका लागि मात्रै हो । यसको सहयोगले पुरुषले आफ्नी प्रेमिकालाई खुशी राख्न सक्ने छन् । तर आशा गरौं महिलाहरुका लागि पनि चाँडै नै यस्तै एप आउने छ ।